Izindaba - Isakhiwo esisha sezitshalo namahhovisi siqala ukwakhiwa
I-Sichuan XiangYue Amandla ezinto zomugqa weCop. (I-XY Tower) yasungulwa ngo-2008. Emizameni yazo zonke izinto, inkampani ikhula ngokushesha okukhulu. Amakhasimende ethu avela kakhulu ezifuywayo naphesheya kwezilwandle, izinkulungwane zemibhoshongo zilethwa kumakhasimende futhi zisebenzisa iChina, iSudan namanye amazwe amaningi.
Ngokwanda kokuthengisa kwethu, amandla wokukhiqiza awakwazi ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ethu. Ngokubheka ukwanda kwemakethe, ibhodi lenkampani linqume ukutshala imali engama-20,000,000 USD ukwakha amahhovisi nezitshalo ezintsha.
Iphrojekthi yakhiwa ngezigaba ezimbili. Esigabeni sokuqala, i-4500 m2 isitshalo kanye nesakhiwo samahhovisi esitezi esingu-5 kuzokwakhiwa. kuzokwenziwa ngonyaka ka-2021. Esigabeni sesibili, enye i-3000 m2 isitshalo sizokwakhiwa Sizoqala ukwakhiwa ngonyaka ka-2023. Ngemuva kokuthi iphrojekthi isiqediwe, umthamo omkhulu wokukhiqiza ungafinyelela kumathani ayi-50,000 ngonyaka.
Isikhathi Iposi: May-06-2020